I-Genshin Impact APK inguqulo yakamuva ye-9 Ansoli - imidlalo yamahhala ye-android
Ngena ku Teyvat, umhlaba omkhulu ogcwele ngokuphila futhi ogeleza ngamandla.
Wena nomfowenu ufike lapha kusuka komunye umhlaba. Uhlukaniswe unkulunkulu ongaziwa, ohluthwe amandla akho, futhi waphonswa ekulaleni okujulile, manje usuwaphaphamele izwe elihluke kakhulu kulapho ufika okokuqala.
Ngakho-ke kuqala uhambo lwakho ngaphesheya kweTechvat ukufuna izimpendulo ku-The Seven - onkulunkulu bezinto ngazinye. Endleleni, lungiselela ukuhlola yonke intshi yalelizwe elimangalisayo, ujoyine amabutho ahlukahlukene abalingiswa, futhi uvule izimfihlakalo eziningi uTyvat aphethe zona ...
UKUVULA UMHLABA WONKE
Gibela noma iyiphi intaba, ubhukuda uwela noma yimuphi umfula, bese uwela umhlaba ongaphansi, uthatha indawo enhle yokuphonsa umhlathi isinyathelo ngasinye sendlela. Futhi uma uyeka ukuphenya i-Seelie ezulazulayo noma indlela engajwayelekile, ubani owaziyo ongase ukuthole?
ISIQINISEKISO SOKUXHUMANA KWE-BB
Hlela izakhi eziyisikhombisa ukuze uveze imvelaphi yokusebenza. I-Anemo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro, ne-Geo basebenzisana ngazo zonke izindlela, futhi ababukeli beVision banamandla okuguqula lokhu kube yinzuzo yabo.
Ngabe uzofaka i-Hydro ngePyro, uyishayele nge-Electro, noma uyiqambe nge-Cryo? Ukwenza kahle kwakho izinto kuyokunika isandla esiphakeme empini nasekuhloleni.
Fakela amehlo akho emhlabeni okuzungezile, ngesitayela sobuciko esimangalisa, ukuhanjiswa kwesikhathi sangempela, kanye nezithombe zezinhlaka ezithuthukisiwe ezikunikeza umuzwa wokubuka ocwilisa ngempela. Ukukhanya nesimo sezulu konke kuguquka ngokwemvelo ngokuhamba kwesikhathi, kuletha yonke imininingwane yaleli lizwe.
Vumela imisindo emisha yeTechvat ukudonsa njengoba uhlola umhlaba omkhulu osondele kuwe. Kwenziwe yiLondon Philharmonic Orchestra, umsindo oguqukayo ushintsha ngaphandle komthungo nesikhathi kanye negeyimu yokufanisa imizwa.
YAKHA IQEMBU LAKHO LESIQALO
Hlangana nabalingisi abahlukahlukene eTevat, ngamunye unobuntu babo obuhlukile, izindaba namakhono. Thola ukuhlangana kweqembu lakho okuthandayo bese ukala izinhlamvu zakho ukukusiza unqobe ngisho nezitha ezinkulu nezitha.
Hlangana nabangane emapulatifomu ahlukahlukene ukwenza isenzo esiyisisekelo, sibhekane nokulwa okuyinkohliso komqashi, futhi unqobe izizinda eziyinselele ndawonye ukuze uthole umvuzo ocebile.
Njengoba umi phezulu kweziqongo zeJueyun Karst futhi uthatha amafu aqengqayo futhi indawo enkulu enwebekile phambi kwakho, ungahle ufise ukuhlala eTechvat isikhashana ... Kepha uze uphinde uhlangane nengane yakho elahlekile, ungaphumula kanjani ? Phuma, Mhambi, bese uqala i-adventure yakho!
Uma uhlangabezana nezinkinga phakathi nomdlalo, ungasithumela impendulo nge-Center Game Service yamakhasimende.
Ikheli leseKhasimende leKhasimende: [email protected]
Isiza Esisemthethweni: https://genshin.mihoyo.com/
Izilimi Zombhalo Ezikhona: IsiShayina (Esenziwe Lula Nezomdabu), isiJapane, isiKorea, isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, iSpanishi, isiPutukezi (iBrazil), isi-Indonesia, isiVietnam, isiRussia, isiThai.
Izilimi ezitholakala nge-Voiceover Izilimi: isiShayina, isiJapane, isiKorea, isiNgisi (i-Voiceover nolimi lombhalo zingashintshwa ngokuzimela).
Inguqulo Yamanje: 1.0.0_1112729_1135452
Izimfuneko: Android 5.0+
Igama Lephakheji: com.miHoYo.GenshinImpact